Home Wararka Qoor Qoor oo muuqda mid gadaal ka riixaya ajandaha Farmaajo iyo Fahad
Qoor Qoor oo muuqda mid gadaal ka riixaya ajandaha Farmaajo iyo Fahad
Fahad Yasin oo horay looga ceyriyay hogaanka hay’adda NISA ayaa dib u bilaabay in uu gadaal ka maamulo siyaasada Dalka isaga oo isticmaalayo Fahad Yasin iyo Farmaajo. Qoor-Qoor & Agaasimihii NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa kulan gaar ah ku yeeshay Muqdisho, waxaana ay kawada hadleen khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday & RW Rooble.
Kulanka oo qayb ka ah qorshaha la doonayo in lagu qaldo shacabka Soomaaliyeed ee rajada ka qabay in kal laga gaaro khalalaasaha siyaasadeed ee la abuuray, ayaa ka dhacay Hoyga Axmed Qoor-Qoor uu ka degen yahay Magaalada Muqdisho, Fahad & xubno la socday ayaa Madaxweynaha Galmudug kala hadlay Khilaafka & go’aanka uu Dowlad-Goboleedkaas ku shaaciyay in wadahadalkii socday lagu kala tagay.
Sida ay sheehayaan Ilo xog ogaal ah, kulankaas ay qayb ka ahaayeen Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Gaadiidka Cabdiraxmaan Dheere, Wasiirka Boostada Galmudug Aadan Qoryooley & xubno kale. Natiijo muuqata lagama gaarin kulankaan, qorshaha ayaa ah in Madaxweynaha DG Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor-Qoor uu dib u bilaabo wadahadalka fashilmay si loo muujiyo in dedaallo xooggan ay socdaan.
Waxaan shaki ku jirin in xaalada dalka marayo ay gaartay heer danahihi dalka iyo dadka loo gacan geliyo qowlaysato iyo kooxo ka ganacsada siyaasadda dalka.